Kulan lagu taageerayo Jubaland oo kadhacay Boosaaso (Sawiro) – Radio Daljir
Kulan lagu taageerayo Jubaland oo kadhacay Boosaaso (Sawiro)
Maajo 22, 2013 11:42 b 0
Bosaso, May 22 – Kulan lagu taageerayo dhismaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta ka dhacay magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Kulanka oo uu soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Bari ayaa waxaa kasoo qaybgalay nabadoonada, haweenka, iyo siyaasiyiin iyo xubno katirsan dowlada Puntland.
Shirka ayaa lagu muujiyay in sida bulshada gobolka Bari ay u taageersanyihiin maamulka Jubaland gaar ahaana xilka madaxwayne ee shirkii Kismaayo loogu doortay Sheekh Axmed Madoobe.
Salaado Abtidoon oo ka mid ah gudiyada 16-ka xaafadood ee magaalada Bosaso oo ka hadashay kulanka ayaa sheegay inay soo dhoweynayso shacabka Jubaland inay doortaan hogaanka maamulka Jubaland.
Nabadoon C/qaadir Xarago oo ka mid ah waxgaradka gobolka Bari oo ka hadlay xaflada ayaa ku nuuxnuuxsaday inay hambalyo bogaadin iyo iskaashi u dirayaan madaxwaynaha dhawaan la doortay ee Jubaland Sheekh Axmed Madoobe.
Nabadoonka ayaa waxaa uu sheegay inuu rajaynayo in la tixgaliyo dastuurka dolwadda faderaalka ee Soomaaliya oo faraya dalka inuu ka hirgallo maamuladii faderaalka ee ka mid ahaan lahaa dowladda dhexe ee faderaalka.
Gudoomiyaha gobolka Bari C/samad Maxamed Galan oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay sagaalka degmo ee gobolka Bari in laga taageeray maadxwaynaha cusub ee Jubaland iyo kuxigeenadiisa.
Dhinaca kale gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay shir kan la mid ah oo uu soo qabanqaabiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ciyoon iyadoo ay ka qaybgaleen xubno ka mid ah bulshada gobolka.
Shirarkaan ayaa daba socda kadib madaxwaynaha Puntland taageero dhawaan uu u muujiyay maamulka Jubaland, inkastoo maamulkaasi ay horyaaliin caqabado ay ka mid tahay xal u helidda diidamada dowladda iyo siyaasiiinta qaar ay ka muujinayaan maamulka madaxwayne Axmed Madoobe.
Caawa iyo Daljir, Arbaca, May 22-2013, Axmed Sh Maxamed Tallman (Daljir Boosaaso)
R/wasaare Saacid oo kulan la yeeshay safiirka Soomaaliya u qaabilsan Midowga Afric sawiro